आजको बिनिमय दर कुन देसको कति हेर्नुहोस तलिका सहित। – Namaste Dainik
आजको बिनिमय दर कुन देसको कति हेर्नुहोस तलिका सहित।
April 7, 2020 NamastedainikLeaveaComment on आजको बिनिमय दर कुन देसको कति हेर्नुहोस तलिका सहित।
काठमाडौँ, चैत २५- आज मंगलबार नेपाली बजारमा यूके पाउण्ड सहित केही देशको भाउ उकालो लागेको छ । त्यस्तै आज अमेरिकी डलरसहति धेरै देशको विनिमयदर ओरालो लागेको छ । भने आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ८८ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ।
भने आज मंगलबार बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय २२ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय २४ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय ३१ रुपैयाँ ४५ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३२ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। छ भने आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ९३ रुपैयाँ ४६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ९५ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज युएई दिराम एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १३ पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।
आज नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय २२ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ। भने आज कतारी रियाल एकको खरिद दर ३३ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ४९ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५० पैयाँ ६२ पैसा रहेको छ।
सरकारी अस्पताल ले जोरो आएको बिरामी चेक नगर्दा ३६ बर्सिये महिला को गयो ज्यान।
विद्युत् सर्ट भई तनहुँमा भिषण आगलागी,दुई घर जलेर नष्ट ।
अमेरिकी डलरहित केही विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
April 25, 2020 Namastedainik
September 10, 2020 Namastedainik
आज कति छ ,अमेरिकी डलरको मूल्य? यस्तो छ अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदर
July 24, 2020 Namastedainik